खेलाडीका दुख : उपचार नपाउँदा 'ब्यानर'को साहारा ! - Khelpati
खेलाडीका दुख : उपचार नपाउँदा 'ब्यानर'को साहारा !
बुधवार, असार २५, २०७६ रमेश सुवेदी
काठमाडौं । ललित स्मृति यू–१८ प्रतियोगिताको चौथो संस्करण ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा जारी छ । कमै मात्र दर्शक देखिने प्यारापिटमा सदाझै मंगलाबार पनि पातलै दर्शक देखिन्थ्यो ।
प्रतियोगिताको २२ औ खेलमा सरस्वती र जावलाखेल मैदानमा थिए । तर दर्शक प्यारापिटमा भने एक फरक दृष्य देखिएका थियो । एक व्यक्ति ब्यानर देखाउँदै बसिरहेका थिए । जहाँ लेखिएको थियो,
एन्फा हिम्मत छ भने
जावलाखेल युथ क्लबलाई कारबाही गर ।
खेलाडीको हितमा हुने नियम लागु गर ।
क्लबको दादागिरी चल्दैन क्लबको ईशारामा नाच्न पाईदैन ।
ब्यानर देखाउने व्यक्ति थिए, समिर विष्ट । उनी जावलाखेल युथ क्लबका पुर्व खेलाडी हुन् । क्लबबाट पिडित बनेका विष्ट ब्यानर देखाएर आफ्नो दुख र पिडा पोख्न खोजिरहेका थिए । जुन घाउ उनको करिब ९ महिना अघिबाट बल्झिरहेको छ ।
ब्यानर देखाउनुको पिडा
एन्फाले गत बर्षको असोज १३ गतेबाट सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ५ बर्ष रोकिएको लिगले पुर्नजिवन पाएको अवस्था थियो । घरेलु फुटबल चलायमान देखिन थाल्यो । बेरोजगार खेलाडीलाई क्लबले सम्पर्क गर्न थाले । लिग खेल्न पाउने भएपछि खेलाडी समेत उत्साहित थिए ।
लिग खेल्न १४ क्लबले एन्फामा खेलाडी दर्ता गराएका थिए । जावलाखेलले समेत समिर विष्ट सहितका खेलाडीको सुचि एन्फामा बुझाएको थियो । समिर ६ महिनाका लागि क्लबसंग अनुबन्धित भएका थिए ।
लिगको तयारी लागि क्लबले पोखरामा हुने आदर्श कप खेल्ने भयो । समिर समेत पोखरा लागे । प्रतियोगिताको दौरान समिर घाईते हुन पुगे ।
उनको घुँडामा नराम्रो चोट लाग्यो । पोखरामा सामान्य उपचार गरे । डाक्टरले केही हप्तामा ठिक हुने बताएका थिए । डाक्टरको सल्लाह अनुसार उनी समेत चुप बसे । तर उनको चोट बढ्दै गयो । घुँडा सुन्निदै गयो । उनी हिड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे । लिग खेल्ने विष्टको सपना बिथोलिन पुग्यो । उनी फुटबल खेल्न मात्र होइन, छुनै नसक्ने अवस्थामा पुगे ।
गत अक्टोबर १० मा घुँडामा चोट बोकेका उनी अहिले सामान्य हिड्न सक्ने अवस्थामा समेत छैनन् । घुँडाको चोटको उपचार गर्न करिब ७ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सामान्य उपचार गर्नमै उनले ४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसके । हस्पिटलले अझै ३ लाख रुपैयाँ लाग्ने बताएको छ ।
‘सुरुमा क्लबले एक लाख रुपैयाँ दिएको थियो । अरु लागेको खर्च दिन्छौ भनेको थियो । तर अहिले आएर दिन नसक्ने बताएको छ ।’ समिरले पिडाभाव पोख्छन् ।
उनले अहिले ग्रान्डी हस्पिटलमा उपचार गराईरहेका छन् । तर क्लबले भने पाटन हस्पिटलमा उपचार गराउन आग्रह गरेको थियो ।
‘क्लबले पाटन हस्पिटलमा उपचार गर्न भनेको थियो । तर मेरो घँुडाको चोटको उपचार पाटनमा हुनै नसक्ने भयो । ग्रान्डीमा उपचार गरेको भनेर क्लब पछाडी हटेको छ ।’ उन भन्छन् ।
खेलाडीको समस्या र क्लबको गुनासो समाधानको जिम्मेवारी घरेलु फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फाको हो । तर एन्फा खेलाडी र क्लबको बिषयमा मौन बसेको समिरको गुनासो छ । उनले आफ्नो समस्या सहितको पत्र एन्फामा बुझाईसकेका छन् । तर एन्फा केही बोल्न मान्दैन ।
‘मैले एन्फालाई पत्र बुझाईसकेको छु । एकपटक महासचिव (ईन्द्रमान तुलाधर)ले पनि कुरा मिलाउँछु भन्नु भएको थियो । तर अहिले सम्म वास्ता नै गर्नुभएको छैन ।’ उनले भने, ‘एन्फाले आफ्नो अनुशासन कमिटिले सबै हेर्छ भनेको थियो । तर अनुशासन समितिका पदाधिकारी अध्यक्ष छैन भनेर लटरपटर मात्र पारेका छन् ।’
तर समिरले अब एन्फा र क्लबबाट आशा मारिसकेका छन् । क्लबले आधामात्र पैसा दिए बाँकी खर्च आफैले ब्यहोरेर उपचार गर्ने उनको योजना थियो । तर त्यो पनि हुन सकेन ।
‘क्लब र एन्फाबाट अब कुनै आश छैन । सुरुमा थियो । अब क्लबले लाज पचाएर हिड्न थालेको छ । एन्फा समेत यस बिषयमा बोल्न चाहदैन । अब जति खर्च लाग्छ सबै आफै ब्यहोर्छु, तर मलाई जस्तो समस्या अन्य खेलाडीलाई नहोस भन्ने चाहाना छ ।’ उनी भन्छन् ।
त्यसैले उनी ब्यानर समाएर जावलाखेलको सबै खेलमा उपस्थित हुन्छन् र विरोध स्वरुप ब्यानर देखाउँछन् ।
मेरो ब्यानरमा अन्य खेलाडीको साथ हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ । तर मेरो अन्य सबै खेलाडीलाई साथ रहन्छ । मलाई जस्तै अरु खेलाडीलाई एन्फा र क्लबले हेप्न नपाउन् ।’ समिर भन्छन् ।
अवको उनको एउटै अभियान छ ।
जावलाखेल क्लबको जहाँ खेल हुन्छ, त्यहाँ समिरको ब्यानर देखिनेछ ।
योर्गेन क्लोप – ‘ब्ल्याक फरेष्ट’ टू ‘एनफिल्ड’